ဒေါက်တာဆာဆာ ကတော့ သတင်းကောင်း ပါး လိုက်ပြီ (ဝင်သာ ဖတ်ကြည့်တော့ဗျာ)…… – Shwe Yoe
Shwe Let | February 25, 2021 | Local News | No Comments
ဘယ်သူအကူအညီမှ မပါဘဲ သူလုပ်နိုင်တယ် သူမှာ နည်းလမ်းတွေ ရှိတယ်လို့ အခိုင်အမာ ပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံ ယနေ့အ ချိန်ထိ မရှိသေးကြောင်းဒါကြောင့်တကမ္ဘာလုံးက မြန်မာပြည် သူ လူထုဘက်မှာရှိနေကြောင်းနိုင်ငံတကာက မြန်မာသံရုံးများလည်းသူနဲ့ ပြည်သူနဲ့ ပူးပေါင်းပါ ပြည်တွင်းက CDM မပါဝင်သေးတဲ့ထမ်းတွေလည်း CDMလုပ်ပြီး ပါဝင်ပေးဖို့ ပြောပါတယ်။
CDMလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာသူရဲကောင်းတွေ ဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ် ပြုမှာဖြစ်ကြောင်း စစ်တပ်ထဲက စစ်သား‌တွေလည်း စဉ်းစားစေချင်ကြောင်းမဟုတ်ရင် အကုန်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ကြောင်း ထည့်ပြောပါသေးတယ်။ တွေ့သင့် တွေ့ထိုက်သူတွေနဲ့ တွေ့ပြီး ပြောသင့်တာတွေလည်း ပြောပြီးပြီ ဆိုပါတယ်။
လာမယ့် သောကြာနေ့ UN တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးပွဲDr. Sar Sar တက်ရောက်ခွင့်ရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားမလျော့ပါနဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဆက်လုပ်ထားပါစစ်အာရှင် အမြစ်ပြတ်စေရမယ်။
ဘယျသူအကူအညီမှ မပါဘဲ သူလုပျနိုငျတယျ သူမှာ နညျးလမျးတှေ ရှိတယျလို့ အခိုငျအမာ ပွောပါတယျ။ စဈကောငျစီကိုတရားဝငျအဖွဈ သတျမှတျပေးတဲ့ နိုငျငံ ယနအေ့ ခြိနျထိ မရှိသေးကွောငျးဒါကွောငျ့တကမ်ဘာလုံးက မွနျမာပွညျ သူ လူထုဘကျမှာရှိနကွေောငျးနိုငျငံတကာက မွနျမာသံရုံးမြားလညျးသူနဲ့ ပွညျသူနဲ့ ပူးပေါငျးပါ ပွညျတှငျးက CDM မပါဝငျသေးတဲ့ထမျးတှလေညျး CDMလုပျပွီး ပါဝငျပေးဖို့ ပွောပါတယျ။
CDMလုပျတဲ့ဝနျထမျးတှဟောသူရဲကောငျးတှေ ဖွဈကွောငျး ဂုဏျ ပွုမှာဖွဈကွောငျး စဈတပျထဲက စဈသား‌တှလေညျး စဉျးစားစခေငျြကွောငျးမဟုတျရငျ အကုနျရှုပျထှေးသှားနိုငျကွောငျး ထညျ့ပွောပါသေးတယျ။ တှသေ့ငျ့ တှထေို့ကျသူတှနေဲ့ တှပွေီ့း ပွောသငျ့တာတှလေညျး ပွောပွီးပွီ ဆိုပါတယျ။
လာမယျ့ သောကွာနေ့ UN တံခါးပိတျအစညျးအဝေးပှဲDr. Sar Sar တကျရောကျခှငျ့ရပါမယျ။ ကြှနျတျောတို့ အားမလြော့ပါနဲ့ ဆန်ဒပွမှုတှေ ဆကျလုပျထားပါစဈအာရှငျ အမွဈပွတျစရေမယျ။
မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏ သာသနာတော် ကို တိုင်တည် သစ္စာပြုပါသည်
မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း မိုးနဲရပ်ဝန်းကြီး အတွက် မိုးတွေပြန်လာပါမည့်ရက်
ကိုဗစ် ကပ်ကြောင့် လာ မည့် ဇွန်လ မှ စတင်ပြီး သိသာ လာမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ စီးပွားရေး